Wareeji AVI ku taagan / Orientation sawirkii
> Resource > Video > Sida loo Laablaab AVI (Xvid, Divx) Video ku taagan / Orientation sawirkii
AVI (Xvid, Divx) waa qaab video ugu badan ee adduunka. Dadka laga helay ilo kala duwan, oo ay ku jiraan rasaas la camera iyo in lagala soo baxo online heli doonaa AVI videos Jihaynta qaldan. Sidaas darteed ma jiraa hab fudud oo isku shaandheyn AVI video si joogto ah?
Haa, laakiin waxaad u baahan tahay qalab sax ah. Halkan ayaan u Khushuucdo Dartiis talinaynaa Wondershare Filmora , taas oo keliya ma aad u saamaxaaya in ay isku shaandheyn video AVI ah, laakiin sidoo kale qaabab kale oo ay ku jiraan Mpg, MP4, MOV, FLV, 3GP, iyo wixii la mid ah. Plus, waxaa soo baxday in ay awood badan software video tafatir oo dhan qaababka lagama maarmaanka u ah dadka isticmaala guriga. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u taaban karaa ilaa AVI videos aad la saamaynta filter, horyaal dhaceen, kala guurka, Picture-in-Picture track iyo wixii la mid ah. Hadda hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan, oo ay bartaan tallaabooyinka ay fududahay in la isku shaandheyn AVI video.
Easy in la isticmaalo AVI Video Rotator:
Badal AVI (Xvid, Divx) videos la click ah.
Si fudud jar, kala, dalagga, ku milmaan iyo jaray videos on waqtiga.
Codso saamaynta cajiib ah oo dheeraad ah oo ah sidii weji Off, Janjeeri-wareeg, Jump gooyaa oo dheeraad ah.
In kor loo qaado si aad video boqolaal saamaynta dhisay-in.
La wadaag video on TV, YouTube, Facebook, iPhone, PSP, iwm
1. Import AVI video inay isku shaandheyn
Barnaamijka ayaa abaabusha files warbaahinta in User ee Album. Dhammaan isbeddelada ku badbaadi doontaa in faylka cusub video si ammaan ah, iyada oo aan la beddelo aad file AVI asalka ah. Sidaas, marka hore waxa ay dajiyaan barnaamijka adigoo gujinaya "Import" button on daaqadaha aasaasiga ah, ama ay soo jiiday, oo files tagtey ka File Explorer si User ee Album.
2. beddesha AVI video
Si aad isku shaandheyn video AVI ah, waxaad u baahan tahay in aad ku darto ka User ee Album in track Video ku Timeline ah. Markaas laba jibaar guji thumbnail AVI video iyo guddi tafatirka muuqan doonaa. Xulashooyinka la isku beddesha ay helaan dusheeda (4 badhamada hoos ku soo bandhigay). Waxaad isku shaandheyn karaa AVI video ka mid ah. Natiijadan ayaa waxa loo arki karaa si degdeg ah xagga daaqaddii Falanqeynta bidix.
Wareeji AVI video 90 darajo u socoto iyo si joogto ah si aad sidoo kale isku shaandheyn karaa video 180 digrii, 270 darajo oo isku shaandheyn ku laabto booska asalka ah.
Wareeji AVI video 90 darajo anticlockwise oo joogto ah, waxay la mid yihiin mid ka mid ah hore ee anti - jihada.
Flip AVI video gudban, yeellay.
Flip AVI video taagan, bidix ilaa midig.
3. Dhoofinta AVI video
Marka aad ka arki kartaa AVI video Jihaynta saxda ah, guji "Abuur" badhanka si ay u joogto ah badbaadin file cusub ama AVI ama qaabab kale. Dhammaan qaabab video joogto ah waxaa taageera oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn AVI, MOV, M4V, MP4, AVI, wmv, FLV, MPEG, iwm Si fudud u dooro qaab target in "Qaabka" tab ah. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari AVI video on iPhone, iPad iyo iPod, bedesho "Device" tab iyo doorasho qalab. Waxa kale oo aad si toos ah u gali kartaa AVI videos in YouTube ama DVD gubi in cajalladaha aad DVD gubi.
Video Tutorial: Sida loo Laablaab AVI Video
Guide dhamaystiran iMoive